राजनीति ठूलो की जनता ? - सिम्रिक खबर
नेपालमा अहिले कोरोना संकर्मण र नेकपाको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगिरहेको छ ।
विश्वका केहि देशमा कोरोनाको प्रकोप जटिल रुपमा बढीरहँदा हामिकहाँ मात्र १ जना कोरोना संक्रमित थिए । विश्वमा संक्रमित देशहरुमा लकडाउन शुरु भयो । यहि क्रमसंगै नेपालले पनि लकडाउन गर्यो । नेपाल सरकारले लकडाउनलाई मानिसको चहलपहल बन्द गराउने कार्यका लागि मात्र लियो । विदेश र छिमेकी राज्य भारतबाट लाखौको संख्यामा नेपालीहरु घर फर्कन्छन् र तिनले संक्रम बोकेर ल्याउँछन् भन्ने सोंचिएन । घर फर्कने नेपालीका लागि कसरी व्यबस्थापन गर्ने भन्ने कुनै कार्ययोजना बनाईएन । बोधो दिमाखी सोंच राख्यो सरकारले । विदेशमा भएकालाई नल्याउने भनियो अनि बोर्डरमा आएकालाई छिर्नै दिईएन । महिना दिनपछि जब गास र बासले बोर्डरमा छटपटि ल्यायो उनीहरु लुकीचोरी सिमा नाघेर घर नहिंडि धरै पाएनन् । उता विदेशमा हुने नेपालीलाई पनि तहाँको सरकारले देश फर्कन दवाव दियो ।
यता सरकार अल्मिलिई राखेको थियो । विदेशबाट नेपाली झिकाउने कुनै योजनानै बनाईएन । नत व्यस्थित क्वारेन्टाईन बन्यो, नत संक्रमित राख्ने अस्पतालको उचित व्यबस्था । विचको करिब एक डेढ महिनाको अवधिमा सरकार बेहोसी जस्तै भैरह्यो । बेलुका ४ बजे स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको सूचि निकाल्ने बाहेक सरकारको उपस्थिति कतै महशुस भएन ।
जनताको करले धानेको यतिठूलो सरकारी संयन्त्र, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, तीनका सल्लाहकारहरु, अझ सरकार चलाउने पार्टीका बरिष्ट नेताहरु र तिनका विज्ञहरु । यत्रो ठूलो जमातले न कुनै योजना बनाउन सक्यो, नत कुनै निर्णय गर्न नै । यतिठूलो राज्य संयन्त्रले एउटा सामान्य मानिसको चेतनाले गर्न सक्ने निर्णय पनि गर्न सक्दैन भने यस्तो राज्यको के काम ? जनता यहि भन्छन् ।
अब कुरो अहिलेको,
सबै कुराको समय र सन्दर्भ हुन्छ । तर हाम्रो देशको राजनीति र राजनीतिज्ञमा यो कुराको अन्दाज छैन । देशमा अहिले ८० प्रतिशत व्यावसाय चौपट छ । व्यावसायीहरु बैंकले दिने तनाबबाट गुज्रिराखेका छन् । रोजगारि छैन । जनताको भान्सामा बिहान बेलुकि धान्ने रासन छैन । पठनपाठन बन्द छ । कोरोना कहर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
यस्तो बेला सत्ता पक्षिय शिकारीहरु प्रम ओलिलाई ढालेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छन् । यो कुराभित्र बर्तमान संकटको समाधन होईन, व्यक्तिगत अभिष्ट पुरा गर्ने कुण्ठा देखिन्छ । बेमौसमि राजनीतिक लेनदेनको चपेटामा जनताहरु पेलिएका छन् । हाम्रो रानीतिक संस्कारमा यस्तो विषम घडीमा पनि नैतिक रुपमा पथभ्रष्ट हुने परिपाटिले जरो गाडिराखेको छ । यसले राजनीतिप्रति जनताको विश्वस त टुट्छ नै र अर्को कुरा यहि राजनीतिक संस्कार देखेका भोली राजनीति गर्ने जवानहरुले कस्तो पाठ सिक्लान ? यो विषयमा चिन्तन जरुरी छ ।
राज्य सँधै राजनीतिक झमेलामा फँसिरहँदा कुनैपनि कुराले गतिलिन सक्दैन । नत कुनै समस्याको मार्गचित्र नै बनाउन सक्छ । यो बर्तमानको उदाहरण हो । यो बेला जनताको दैनिकिलाई पुनः कसरी सामान्य बनाउने, सडकमा पुगेका व्यवसायहरुलाई कसरि व्यूँताउने र कोरोना संक्रमणलाई कसरी निस्तेज गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर कडा रुपमा उत्रने बेला हो । जुन तिकडमले प्रधानमन्त्री पड्काउन सकिन्छ भनेर दिमाग लगाईएको छ, त्यही दिमागले एकछिन देशको कोहोलो शान्त पार्न सके जनता धन्य हुनेथिए । राजनीति गर्ने समय त जहिले पनि छ ।